युगसम्बाद साप्ताहिक - गैरजिम्मेवार राजनीति
Thursday, 04.09.2020, 09:39pm (GMT+5.5) Home Contact
Tuesday, 09.02.2014, 08:50pm (GMT+5.5)
राष्ट्रिय राजनीतिलाई आमसहमतिको बाटोमा अगाडि बढाउने एउटै मात्र आधार राष्ट्रिय मुद्दामा सबै राजनीतिक दलहरूको एकीकृत धारणा निर्माण हुनु हो । तर दुःख र दुर्भाग्यको कुरा नेपालका राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रिय स्वाधिनता र अखण्डताको रक्षा गर्दै लोकसम्मतिका आधारमा राजनीतिक कदम चाल्ने कुनै संस्कार नबसालेका र बाह्य स्वार्थको प्रभाव ग्रहण गरेर निर्देशित कदम चाल्ने गरेको दृष्टान्त एक होइन अनेक छन् । मुलुकमा निर्धारित समयमा संविधान जारी हुन्छ भन्नेमा आशंका बढ्दै गएको छ । जिम्मेवार राजनीतिक दलहरु आआफ्नै दाउमा छन् । संविधान निर्माणमा ओठे प्रतिबद्धता बाहेक केही देखिएको छैन । अबको चार दिनभित्र विवादित सबै विषयमा सहमति जुटाइसक्ने कार्यतालिका छ तर कार्यतालिका अलपत्र पर्ने निश्चित जस्तै छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरू केवल सत्ताको खिचातानीमा अल्झेका छन् । उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गठनको मुद्दा होस् वा २६ सभासद मनोनयनका कुरा सबैमा नेताका स्वार्थ मात्र हावी छ । कसरी शक्ति आर्जन गर्ने भन्ने खेल निरन्तर चलिरहेको छ । निर्वाचनबाट पहिलोबाट तेस्रो शक्तिमा खुम्चिएपछि एमाओवादी कसरी आफूलाई हावी गराउने भन्ने ध्याउनमा रहेको छ । यसैको उपजको रुपमा उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको गठन गर्ने र त्यसको नेतृत्व अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गर्नुपर्ने अडानमा छ ।
यतिबेला ऐतिहासिक रुपमा गठन भएको पहिलो संविधानसभा आफ्नो उद्देश्यमा असफल हुनुका कारणहरु दोहोरिन थालेका छन् र त्यस्ता दृश्य पुनरावृत्ति गर्ने कोही नभएर त्यतिबेलाका र अहिलेका पनि मुख्य राजनीतिक दलका नेताहरु नै हुन् । दोस्रो संविधानसभा पनि सोही दिशामा अग्रसर हुँदा समेत अहिलेसम्म यसमा कुनै पनि दलका नेताहरूले कुनै लज्जाबोध गरेका छैनन् । देश र जनताप्रतिको दायित्वबोध नगर्ने नेताहरू अरूकै स्वार्थपूर्तिको गोटी बन्ने खेलमा रमाउने गरेकाले देशको स्थिति दिनप्रतिदिन नाजुक बन्दै गएको छ । राजनीतिमा इमान, नैतिकता र जिम्मेवारीबोधको कुनै संकेत छैन । नातावाद, कृपावाद र धनवाद प्रचूर मात्रामा हावी भएको छ । कांग्रेस, एमाले तथा राप्रपा नेपालले गरेको सभासद नियुक्तिले पनि यो कुरालाई पुष्टि गरेको छ । २६ मा १७ सभासद मनोनित भएपछि तीनवटै दलभित्र चर्को विरोध सुरु भएको छ । यसले दलहरु अरु कमजोर हुने स्पष्टै छ । मुलुकको अस्थिरता र संक्रमणको अन्त्य गरी आर्थिक–सामाजिक विकासमा लाग्नुपर्ने राजनीतिक दलका नेताहरुमा राष्ट्रिय आवश्यकताप्रति कुनै चासो छैन । यसको दृष्टान्त मुलुकभर गएको बाढी, पहिरो र त्यसले पुर्याएको क्षतिलाई लिन सकिन्छ ।
जनता मरे मरुनु, डुबे डुबुन, पहिरोले पुरे पुरोस् तर नेताहरुलाई आफ्नो स्वार्थ मात्र पूरा हुनुपर्छ । गैर जिम्मेवारीको पराकाष्टा नै नेताहरुले देखाएका छन् । पूर्वदेखि पश्चिमसम्म तराईका अधिकांश भूभाग डुबानमा परे तर मधेशको जनताको हकहितका लागि भन्दै चर्का नारा लगाउने मधेशवादीहरुले सहानुभूति समेत व्यक्त गरेनन् । उनीहरुका लागि एक मधेश एक प्रदेश नै सबैभन्दा ठलो मुद्दा बन्यो । आफूलाई भोट दिएर सभासद बनाउने जनताप्रति उनीहरुको वेवास्तालाई कुन स्तरको कसको सेवाका लागि राजनीति गरिरहेको भन्ने र मान्ने ? जुनजुन अडानले हिजो संविधान बनेन आज पनि सोही अडानमा कायम रहने हो भने संविधान बन्ने कुनै सम्भावना रहँदैन तर संविधानका विमतिहरुमा सहमति खोज्ने भन्दै समयको अपव्यय मात्र भैरहेको छ । न सहमति हुने न विधिबाट जान दिने भएपछि संविधान कसरी बन्छ ? राजनीतिक दलहरुले जे गर्छन् त्यही संविधान र नियम–कानुन मान्नुपर्ने अवस्था छ । विधिको शासनको पूरै वेवास्ता भैरहेको छ । १७ सभासद मनोनयनमा पनि यो कुरा देखियो । नियुक्तिमा संविधानको घोर अपमान र उल्लंघन भयो । सर्वोच्च अदालतको आदेशको सम्मान गरिएको देखिए पनि संविधानको मर्मको पालना भएन । जस्तालाई मनोनित गर्नुपथ्र्यो त्यो गरिएन । राजनीतिक दलहरुभित्र मनोनित सभासदका कारण अर्को किसिमको द्वन्द्व चर्किने संकेत प्रशस्तै छ । यो गलत अभ्यास हो । मुलुकलाई निकास दिने दिशामा पूरै गैरजिम्मेवार चरित्र हो ।
प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरूसंग मुलुकलाई संवैधानिक राजनीतिक संकटबाट कसरी मुक्त गर्ने भन्नेबारे कुनै प्रष्ट मार्गचित्र छैन । विगतमा तीन दलको सिण्डिकेट चलेजस्तै अहिले पनि त्यस्तै आकांक्षा प्रवाहित छ । तर मुलुकलाई सही बाटोमा लैजान बहुपक्षीय बृहद् राजनीतिक संवाद हुनु आवश्यकता बोध भैरहे पनि यस दिशातिर कसैको पनि अग्रसरता छैन । आवश्यकता अनुसारको काम केही नगर्ने तर स्वार्थपूर्तिका लागि व्यक्तिगत कुरालाई राष्ट्रिय मुद्दा बनाएर सिंगो मुलुकको ध्यान अन्तै मोड्ने गलत संस्कारको अन्त्य नभएसम्म मुलुकले निकास पाउँदैन ।
माघ ८ टार्ने खेल (08.28.2014)
विपत्ति कम गर्ने उपाय खोज (08.20.2014)
राष्ट्रिय दृष्टिकोण अपरिहार्य (08.13.2014)
मोदीको नेपाल भ्रमण (08.04.2014)
बजेट र बहस (07.22.2014)
नेकपा एमालेको नवौं महाधिवेशन (07.09.2014)
जनस्वास्थमाथि खेलबाड नहोस् (07.02.2014)
नियतिको पुरानै बाटो (06.27.2014)
हाम्रो प्रतिबद्धता (06.16.2014)